ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မဟူရာနောက်ခံဝယ်......(၂)”
ကိုကျော်စိုး ရောက်ရာ နေရာက မြန်မာ့အရေးထဲမှာ ဆက်လက်လှုပ်ရှားပါဝင်နေစေဖို့ မျှော်လင့်လျှက်ပါ။
I really respect you, Ko Kyaw Soe. We need many people like you. I wish you all the best.
ယခုလို သတိတရ နဲ့ အမှတ်တရ ရေးသားမှုအတွက် OBP အဖွဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
သတိတရနဲ့ ၀င်ရောက် ကော်မန့် ရေးပေးသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ မော်ဒန်ကွန်မြူနစ်တွေကြောင့် အခြေအနေ အတိုင်းအတာတစ်ခုအရ အဝေးကို ရောက်ရှိသွားပေမယ့် ကိုကျော်စိုး နဲ့ ကျန်တဲ့ ရဲဘော် သုံးယောက်ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် နဲ့ တက်ကြွ ဖျတ်လတ်တဲ့ စိတ်အားအင်တွေက ဘယ်တော့မှ မယိုင်လဲပဲ အမြဲတမ်း ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ရှိနေမြဲပါပဲ။
Thanks so much, Ko Paw, for the post.
ကျနော်တို့ တနေ့ ပန်းတိုင်ရောက်ရမှာပါ
hi ko kyaw soe i salute u..
cheers..i wish u all the best..
ဲJ Moe said...
အားလုံးကို အမှတ်တရရှိနေပါတယ်ဗျာ အထူးသဖြင့် စင်္ကာပူမြန်မာသံရုံးမှာ မျက်မှန်အနက်ကြီးနဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်..ဝဝ.... အတွင်းရေးမှုးမလေး(ကြီး) Ms Anna နဲ့ ကိုကျော်စိုး စကားပြောနေတာတွေ......
သံအမတ်ကြီးအပြင် အခြား သံဝန်ထမ်းတွေနဲ့စကားပြေခဲ့တာတွေ......
စင်္ကာပူက ထောက်လှမ်းရေးတွေ ရဲတွေနဲ့ ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေ...................
ခြင်္သေ့ကျွန်းမှာ ပြည်ပရောက်မြန်မာမျိုးချစ်တွေ အားလုံး...အားလုံး .... ထဲမှာ.....
ကိုကျော်စိုး..........ဆိုတာ..............သမိုင်းစာမျက်နှာထဲက......... ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့..........ရိုသားတဲ့နေ့တွေကို ယုံကြည်ချက်နဲ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ... အားပေးတယ် သူငယ်ချင်း......ဒီမိုကရေစီ ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေအတွက် ကျော်စိုး ဆိုတာ မျိုးဆက်သစ် တို့အနာဂတ်မှာ လင်းလက်ဖို့ အတွက် ကြယ်စင်လေး တစ်ပွင့်ပါ.............။
Ko Kyaw Soe,
I really miss u,we know how u love ur people & motherland.i respect u & i'll never forget ur help & participated our wedding.we wanna meet u again if we haveachance.we wish u all the best
ur's younger bro's wife
Thank you Ko paw & all comrades..
All well wishers and my Bro & Sis…
I don’t know how to describe….
If only I could transform my emotion to words…..
Sincerely thanks for support & encouragement…..
Miss you all………………….
ကျနော် သံရုံးထဲက မဲပေးပြီး ထွက်လာတော့ ဒီအစ်ကိုကြီးထင်တယ် သံရုံး ခြံဝကနေ လက်ဆွဲ နုတ်ဆက်ပြီး အားအင် အပြည့်နဲ့ ရီပြတာ.. အဲ့တုန်းက ကြက်သီးတောင် ထတယ် . သူအဲ့လို တော်တာပါ. အသေးစိတ်ကို ပါးပါးနပ်နပ် ဂရုစိုက်တတ်ပုံ ရတယ်..။ စိတ်မကောင်းဘူးဗျ. အခုတခြားနေရာရောက်သွားတော့. ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ဘယ်နေရာရောက် ရောက် တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေမယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်... (FullStop)
မြန်မာ့အရေးအတွက် ကိုကျော်စိုး.. မနေနေတို့ လို ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ရှိနေတဲ့ တက်ကြွ ရဲရင့်တဲ့သူတွေ ကို လေးစား ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ..
ရှေ့ လျှောက် အောင်ပွဲတွေ ဆင့်ကဲ ရယူနိုင်ဦးမယ်လို့ လဲ ယုံကြည်တယ်..
တရားမျှတမှုဟာ တနေ့ တော့ လူတိုင်းလက်ဝယ် ရရှိရမယ်..
အခွန်ရုံး ကအပြန် orchard ကနေ cityhall ထိ လမ်းလျှောက် ကြမယ် ဆိုပြီး အထွက် လမ်းထိပ် နားမှာ ပခုံး ကိုပုတ်ပြီး " ကျေးဇူးပဲဗျာ နောက်လဲ ဆုံကြ အုံးမယ်" လို့ ပြောခဲ့တာ ဒီအကိုကြီး ပဲပေါ့ သေသေချာချာ မှတ်မိ သေးတယ်။ အော်... ခုတော့ ဒါပေမယ့် ကိုကျော်စိုး တယောက် ရောက်ရာ ဒေသမှာ မြန်မာ့ အရေးကို လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် နေအုံးမယ် ဆိုတာ ယုံကြည် ပြီးသားပါ
တီပီချစ်သူများ ရေးထားတာကို ဖတ်ရတာနဲ့တင်း ကြက်သီးထတယ်..တစ်ခွန်းပဲပြောစရာရှိတယ်.. မမြင်ဘူးပင်မယ့် အရမ်းကို လေးစားပါတယ် ကိုကျော်စိုး .. စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြန်ကျဆုံပါစေ..
ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ရတော့ ကိုကျော်စိုးကို တော်တော်လေးသတိရမိတယ်... ကျမတီပီသင်္ကြန်မှာဂျူနီယာအဖြစ် စပြီး သီချင်းဆိုတဲ့နှစ် ၂၀၀၂မှာ ကိုကိုက အသံစစ်မှာ အကဲဖြတ်အနေနဲ့ စသိခဲ့ပြီး ကျမသီချင်းဆိုတိုင်းလဲ "ငါ့ညီမ အဆိုကောင်းတယ်" ဆိုပြီး အားပေးခဲ့လို့ အားတက်ခဲ့ရတယ်.. ကျမတို့ တီပီမောင်နှမတွေကတော့ သူ့ကို ကိုကိုလို့ ခေါ်ကြတယ်.. တီပီသင်္ကြန်ကျင်းပတိုင်း အားသွန်ခွန်စိုက် ဂျူနီယာတွေကိုလိုက်စည်းရုံးခဲ့တာ အကတိုက်တဲ့နေရာ သီချင်းတိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ အမြဲလိုအပ်တာတွေကို ကြည့်ရှုခဲ့တာ.. လိုအပ်နေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေအတွက် ကျရာနေရာက ကောင်းအောင်ဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ..
၂၀၀၅ သင်္ကြန်တုန်းကလားမသိဘူး.. မနက်ဖက် နှာတစေးစေးနဲ့ နေမကောင်းဖြစ်နေပင်မဲ့ သံချပ်တိုက်တော့ အားမာန်အပြည့်နဲ့ ခုံပေါက်ပြီး Performance ကိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာ..
ကိုကိုက လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ စည်းရုံးရေးမှာ အတော်တော်တဲ့သူတစ်ယောက်.. အပြောလဲကောင်းတယ်.. အမြဲလဲ ပြုံးရွှင်နေတတ်တယ်..
၂၀၀၅ တီပီသင်္ကြန်မှာပဲထင်တယ်.. ပရိတ်သတ်အရမ်းများပြီး ပရိတ်သတ်ကိုမနိုင်တာကြောင့် ပြပွဲနှောင့်နှေးတာကို complain တွေလာ ပရိတ်သတ်က အုံ့အုံ့ကြွကြွနဲ့ စိတ်မရှည်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်.. ဇာတ်ဆင်နောက်မှာလဲ သူ့ပြဿနာသူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ..လူပေါင်း ၁၀၀၀ကျော်ရှိတဲ့ ပရိတ်သတ်ရှေ့က စင်ပေါ်ကို တစ်ယောက်ထဲထွက်ပြီး လက်တန်းတောင်းပန်စကားပြောရင် ပွဲထိမ်းခဲ့တဲ့ အရည်အချင်းကလဲ တကယ်ကိုလေးစားစရာပါပဲ.. အဲဒိနောက်ပိုင်း ရုံတွင်းက ပရိတ်သတ်တွေလဲ အခက်အခဲကိုနားလည်ပြီး ညိမ်သွားကြတယ်..
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်းမှာလဲ သူအားတက်သရောပါဝင်တာတွေ့တော့ ဂုဏ်ယူမိတယ်.. နောက်ပိုင်းစလုံးအစိုးရကလုပ်တဲ့ သူ့အခက်အခဲတွေကာလမှာ စီးတီးဟောမှာတွေ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိန်ပြီး ကတုံးဆံပင်ပေါက်နဲ့ အသားတွေညိုသွားတဲ့ ကိုကို့ကိုတွေ့ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး... ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ပြုံးမြဲပါပဲ.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူလုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့သမိုင်းက ကျမတို့ရင်ထဲမှာ ရှင်သန်နေမှာပါ.. ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး.. သူနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျမအရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်.. ခုလို သူ့အကြောင်းကို ပိုစ့်ရေးပြီး မှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့ ကိုပေါကိုလဲ စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်....